Familial Mediterranean fever - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Familial Mediterranean fever
Familial Mediterranean fever ကဘာလဲ။
ရေးသားသူ Dr.Nyan Linn ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ Dr. Kaung Thar
Familial Mediterrannean Fever ဆိုတာ မကြာခဏ ဖျားပြီး အဆစ်အမြစ်၊ အဆုတ် နဲ့ ဝမ်းဗိုက်ပိုင်းများ ရောင်ရမ်းတဲ့ရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။
Familial Mediterranean fever က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
Familial Mediterrannean Fever ဆိုတာ မျိုးရိုးလိုက်တတ်ပြီး Mediterranean မျိုးနွယ်စုများဖြစ်တဲ့ Sephardic Jews, Arabs, Greeks, Italians, Armenians and Turks တွေမှာပိုမို တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ အခြားသော လူမျိုးစုတွေမှာလည်း တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ အသက်အရွယ်မရွေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အမျိုးသားတွေမှာ အနည်းငယ်ပိုမိုဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့အချက်အလက်တွေကို လျှော့ချခြင်းအားဖြင့် စီမံနိုင်ပါတယ်။ အချက်အလက်များထပ်မံသိရှိဖို့အတွက် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
Familial Mediterranean fever ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
Familial Mediterrannean Fever ရဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေက ဘာတွေလဲ။
Familial Mediterrannean Fever ရဲ့ အဖြစ်အများဆုံးရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့
-ခြေထောက် အထူးသဖြင့် ဒူးအောက်ပိုင်းတွင် အင်ပြင်များထလာခြင်း
ရောဂါလက္ခဏာမပြနေချိန်မှာ သာမန်အကောင်းပကတိလိုဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ရောဂါလက္ခဏာမပြချိန်ဟာ ရက်အနည်းငယ်မှ နှစ်များစွာထိကြာမြင့်တတ်ပါတယ်။
(တကယ်လို့ တခြားဘာအချက်အလက်မှမရှိဘူးဆိုရင် ဒီအောက်ကစာသားကို ထည့်သွင်းပါ)
Familial Mediterranean fever ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ဘာတွေက Familial Mediterrannean Fever ဖြစ်ပွားစေသလဲ။
Familial Mediterrannean Fever ဆိုတာ မိဘမှ သားသမီးသို့ ဆင့်ပွားပေးသော Gene လို့ခေါ်တဲ့ ဗီဇ အစိတ်အပိုင်း လေးတစ်ခု ပြောင်းလဲသွားမှုကြောင့် ဖြစ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသို့ပြောင်းလဲသွားခြင်းဖြင့် ခန္တာကိုယ်အတွင်း ရောင်ရမ်းမှုကို ထိန်းချုပ်သော လုပ်ငန်းစဉ်များ ကိုနှောင့်ယှက်မှုများဖြစ်သွားတတ်ပါသည်။
Familial Mediterrannean Fever ဖြစ်သောသူများတွင် MEFV ဟုခေါ်သော Gene ဗီဇအစိတ်အပိုင်းတွင် ပြောင်းလဲမှုများဖြစ်သွားခြင်းဖြစ်သည်။ အချို့ပြောင်းလဲမှုများ က စိုးရိမ်ရသော အခြေအနေဖြစ်စေနိုင်ပြီး အချို့မှာတော့ အသေးစားလက္ခဏာများသာ ဖြစ်စေပါသည်။
ငါ့ဆီမှာ Familial Mediterranean fever ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
ဘယ်အရာတွေက Familial Mediterrannean Fever ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေပါသလဲ။
Familial Mediterrannean Fever ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်
-ထိုကဲ့သို့ရောဂါမျိုး မိသားစုဝင် တစ်ဦးတွင်ရှိခြင်း
– Mediterrannean မျိုးနွယ်စုဖြစ်ခြင်း (Sephardic Jews, Arabs, Greeks, Italians, Armenians and Turks တွေမှာပိုမို တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ အခြားသော လူမျိုးစုတွေမှာလည်း တွေ့ရတတ်ပါတယ်။)အထက်ပါဖြစ်ပွားနိုင်ချေများ မရှိခြင်းကြောင့် သင့်မှာ Familial Mediterrannean Fever မဖြစ်ဘူးလို့ ပြောလို့မရနိုင်ပါဘူး။ ဒီအချက်လက်များဟာ မှီငြမ်းကြည့်ရှုဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင် ဆွေးနွေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
Familial Mediterranean fever ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ဆရာဝန်က သင်ခံစားရသော ရောဂါလက္ခဏာများ ကိုမေးမြန်းပါမည်။ ထို့နောက် လိုအပ်သော စမ်းသပ်မှုကိုပြုလုပ်ပါမည်။
-အဓိကအားဖြင့် သင့်မိသားစု နှင့် မျိုးနွယ်စု ရာဇဝင် ကိုမေးမြန်းပါမည်။
-လိုအပ်သော သွေးဖေါက်စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ပါလိမ့်မည်။ သွေးထဲတွင် Inflammatory Markers ၊ WBCs သွေးဖြူဥ ပစ္စည်းများ မြင့်တက်နေသည်ကို တွေ့နိုင်ပါသည်။
-မျိုးရိုးဗီဇနှင့်သက်ဆိုင်သော စမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် MEGV gene တွင်ပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်မဖြစ် စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။ သို့သော် တိကျမှုတော့မရှိချေ။ ထို့ကြောင့် ဆရာဝန်များ အနေဖြင့် မျိုးရိုးဗီဇနှင့်သက်ဆိုင်သော စမ်းသပ်မှုများကို အဓိကထား မဆောင်ရွက်ချေ။
Familial Mediterranean fever ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ထိုရောဂါကို အမြစ်ပြတ် ကုသထုံးတော့ မရှိသေးပါ။ သို့သော် ခံစားရသော ရောဂါ လက္ခဏာများ သက်သာအောင်တော့ ကုသနိုင်ပါသည်။
Colchicine – ဆေးပြားပုံစံနဲ့လာပါတယ်။ ခန္တာကိုယ်မှာ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ရောင်ရမ်းမှုများ ကိုသက်သာစေပြီး နောက်ထပ်မဖြစ်အောင် လည်းကာကွယ်ပေးပါတယ်။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက Familial Mediterranean fever ကို ကုသရာမှာ ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများက သင့်အနေဖြင့်
Familial Mediterranean fever ကိုကုသတဲ့နေရာမှာနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေတဲ့နေရာတွေမှာ အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။
Familial Mediterranean fever. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/familial-mediterranean-fever/basics/definition/con-20025734. Accessed November 10, 2017.
Familial Mediterranean Fever. https://rarediseases.org/rare-diseases/familial-mediterranean-fever/. Accessed November 10, 2017.
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ မတ် 12, 2018 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း စက်တင်ဘာ 13, 2019
Health A-Z, ကျန်းမာရေးအားလုံး, ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ
Internal thrombosed hemorrhoids (အတွင်းလိပ်ခေါင်း)
Lip cancer (နှုတ်ခမ်းကင်ဆာ)
Febrile seizures in children (ကလေးများတွင်အဖျားကြောင့်တက်သောရောဂါ)
Health A-Z, ကျန်းမာစွာနေထိုင်ခြင်း, ကျန်းမာခြင်းနည်းလမ်းများ, ကျန်းမာရေးအားလုံး, ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ
Scarlet fever (စကားလတ်အဖျား)
Vaginal prolapse (မိန်းမကိုယ် ကျွံခြင်း)